Ukhiye Wokutholwa Kokulawula Komkhiqizo Wakho Ukwenza kube ngokwakho | Martech Zone
Wonke amathemba kanye namakhasimende akhuthazwa ngokuhlukile, afike ebhizinisini lakho ngezindlela ezahlukahlukene, ezinamazinga ahlukene enhloso, afuna imininingwane ehlukile, asezingeni ezihlukile Ukuhamba kwamakhasimende, futhi balindele ukuthola ngokushesha abakudingayo. Akukho lutho olukhungathekisayo njengokubamba ubambe lapho uzama ukuthatha isinyathelo esilandelayo.
Mhlawumbe kuyinto elula njengokushayela izinsizakalo zamakhasimende futhi ubanjwe ku-loop engapheli yochwepheshe bezinsizakalo nezikhathi zokulinda. Noma, mhlawumbe kuyinto efana nokuzama ukuhlela ukuboniswa kepha inqubo yokuthumela ifomu iholela ephutheni. Kunoma ikuphi, kuyakhungatheka futhi lokho kukhungatheka kudlalwa ngumthengi noma ikhasimende ngokufaka isikhalazo sabo ku-inthanethi nasemphakathini.
Amanethiwekhi omphakathi ahlinzekele abathengi namabhizinisi ngendawo emangalisayo yokuzwa izwi labo. Futhi abesabi ukuyisebenzisa. Lapho lokhu kuziphatha kuqubuka okokuqala ku-inthanethi, imikhiqizo yezwa sengathi ilahlekelwe ukulawula. Sibhale esikhathini esedlule mayelana nokulahleka kwe- ukuphelela komkhiqizo, kepha yimikhiqizo ngempela engenakuzisiza?
UJohann Wrede, Umqondisi Omkhulu Womhlaba Wonke we-SAP Customer Engagement, akakholelwa kanjalo. Kungavinjelwa ukusebenzisa okuhlangenwe nakho okwenziwe ngezifiso, ukubikezela ukuhola noma ukusebenza kwethemba, nokubeka izinketho amakhasimende azidingayo phambi kwazo ngesikhathi ebezikudinga ngaso. Ngamanye amagama - ukube ulwazi belumnandi - abathengi bebengeke bakhononde online.
Lalela Ingxoxo yethu noJohann Wrede
Qiniseka ukulanda Umhlahlandlela we-SAP wokuqonda nokwenza imephu ohambweni lwamakhasimende. Ungafunda kabanzi kusuka kuJohann ku- Ikusasa Lezohwebo futhi Umngcele weKhasimende amabhulogi. Futhi-ke, hlola Ukuzibandakanya KweKhasimende le-SAP Imikhiqizo.
Njengomholi wemakethe kwisoftware yokufaka ibhizinisi, i-SAP isiza izinkampani zabo bonke osayizi nezimboni ukuthi ziqhubeke kangcono. Ukusuka ehhovisi elingemuva kuya egumbini lokufundela, ishede kuya ngaphambili kwesitolo, ideskithophu kuya kumakhalekhukhwini - I-SAP inika amandla abantu nezinhlangano ukuthi basebenze ngokubambisana futhi basebenzise ukuqonda kwebhizinisi ngempumelelo ukuze bahlale phambili komncintiswano. Izicelo nezinsizakalo ze-SAP zinika amandla amakhasimende angaphezu kwama-291,000 ukuthi asebenze ngokunenzuzo, azivumelanise ngokuqhubekayo, futhi akhule ngokuzinzile. Ngeminye imininingwane, vakashela ku- SAP.
Tags: ukuzibandakanya kwamakhasimendeUkuhamba kwamakhasimendeikusasa lezentengiselwanojohann wredeukuzenzelaSAPonqenqemeni lwamakhasimende